Shiinaha Soosaaraha Qolka Qabow iyo Badeecad | Xinneng
Qolka qabow waxaa siiya macmiilka leh dhererka loo baahan yahay, ballaca, dhererka iyo heerkulka isticmaalka. Waxaan kugula talineynaa qolka qolka qabow ee u dhigma sida kuleylka isticmaalka. Qolka qabow ee heerkulka sare iyo dhexdhexaadka ah guud ahaan wuxuu adeegsadaa 10 cm alwaaxyo qaro weyn, iyo keydinta heerkulka hooseeya iyo keydinta qaboojinta guud ahaan waxay isticmaalaan 12 cm ama 15 cm alwaax adag Dhumucda saxanka birta ee soo saaruhu guud ahaan wuxuu ka sarreeyaa 0.4MM, cufnaanta xumbada ee guddiga qolka qabowna waa 38KG ~ 40KG / mitir cubic halkii mitir cubic marka loo eego heerka qaran.
Qolka qabow waxaa siiya macmiilka leh dhererka loo baahan yahay, ballaca, dhererka iyo heerkulka isticmaalka. Waxaan kugula talineynaa qolka qolka qabow ee u dhigma sida kuleylka isticmaalka. Qolka qabow ee heerkulka sare iyo dhexdhexaadka ah guud ahaan wuxuu adeegsadaa 10 cm alwaaxyo qaro weyn, iyo keydinta heerkulka hooseeya iyo keydinta qaboojinta guud ahaan waxay isticmaalaan 12 cm ama 15 cm alwaax adag Dhumucda saxanka birta ee soo saaruhu guud ahaan wuxuu ka sarreeyaa 0.4MM, cufnaanta xumbada ee guddiga qolka qabowna waa 38KG ~ 40KG / mitir cubic halkii mitir cubic marka loo eego heerka qaran. Warshadu waxay sameyn doontaa albaabbo kaladuwan oo kaladuwan iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, badiyaa cabirka albaabka caadiga waa 0.8m * 1.8m. Haddii macaamilku aanu lahayn cabbirka la rabo, waxaan sidoo kale yeelan doonnaa cabbirro qol qabow oo caadi ah oo loogu talagalay macaamiisha inay doortaan.
Qaybta qolka qabow ee polyurethane waxay u isticmaashaa polyurethane khafiif ah maadada gudaha ee qolka qabow. Faa'iidada polyurethane waa in waxqabadka kuleylka kuleylka uu aad u wanaagsan yahay. Banaanka qeybta qolka qabow ee polyurethane wuxuu ka kooban yahay SII, saxanka birta midabka PVC iyo walxaha saxanka birta ah. guddiga qolka sababo la xiriira farqiga u dhexeeya heerkulka weyn ee u dhexeeya gudaha iyo dibedda, taas oo ka dhigaysa qolka qabow mid tamar badan oo kaydiya iyo hagaajinta waxtarka shaqada ee qolka qabow.
Astaamaha Gudida Qolka Qabow ee Polyurethane
1. Polyurethane adag ayaa leh kuleylka kuleylka iyo waxqabadka kuleylka wanaagsan.
2. Polyurethane adag waa mid qoyaan-u-adkeyn ah oo aan biyuhu xireynin.
3. Dabka adag polyurethane, dib u dhaca ololka, caabbinta heerkulka sare.
4. Sababtoo ah waxqabadka kuleylka kuleylka ee kuleylka ah ee looxyada polyurethane, waxay yareyn kartaa dhumucda baqshadda dhismaha waxayna kordhin kartaa gudaha.
5. U adkaysiga adag ee isbedelka, ma fududa in la dillaaco, xasilloon oo ammaan ah dhammaystir.
6. Maaddada Polyurethane waxay leedahay qaab-dhismeedka xasilloonida xasilloonida oo asal ahaan waa qaab dhismeedka unug xiran, oo aan kaliya lahayn waxqabadka kuleylka kuleylka ee heer sare ah, laakiin sidoo kale leh iska caabin baraf-dhalaal wanaagsan iyo nuugista codka.
7. Waxqabad sare oo heer sare ah
Qeexitaannada dhumucda ee qolkeenna qabow ee polyurethane waa: 75.100.120.150.180, 200MM xulashada. Qalabka difaaca ee ugu weyn waa: saxan aluminium ah oo la dhejiyay, saxanka birta ah ee birta ah, saxanka birta ee zinc, saxanka birta ah ee cusbada leh, iyo saxanka caadiga ah ee dhulka. Waxaan badiyaa isticmaalnaa saxan aluminium ah oo xardhan iyo saxanka birta aan lahayn.
Macluumaadka Mashruuca Qolka Talaajo:
Dhererka Ballaaran Dhererka CBM Heerkulka Tirada
Dhumucdiisuna waxay guddi
Bir midab leh, Bir daxal lahayn, galvanized (loo habeeyay)
Oo dhumucdiisuna waxay ka mid ah cover steel guddi
Kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka leh oo leh qufulka cam-qufulka
Hore: Generator-ga Naaftada Aamusan - Generator Nooca Aamusnaanta - Xinneng
Xiga: Qaybta Qaboojiyaha ee loo yaqaan 'Monoblock Refrigeration Unit'
Qaybta Qaboojinta Qolka Qabow
Qaybaha Qaboojiyaha Qolka Qaboojiyaha
Qalabka Qaboojiyaha Qolka Qabow
Qaybta Qolka Qabow